Nge-22 kaSeptemba i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-22 kaSeptemba i-Zodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-22 kaSeptemba i-Zodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac kaSeptemba 22 yiVirgo.
Uphawu lweenkwenkwezi: Intombazana . Olu phawu lwe-zodiac luthathwa njengelichaphazela abo bazalwe ngo-Agasti 23-Septemba 22, phantsi komqondiso we-Virgo zodiac. Kuyacetyiswa ukuba inenekazi elinyulu lichumile kwaye lilumkile.
Inkqubo ye- IVirgo Constellation yenye yeenkwenkwezi ezili-12 ze-zodiac, ezibekwe phakathi kukaLeo ukuya eNtshona kunye neLibra eMpuma kwindawo ye-1294 sq degrees kunye neenkwenkwezi eziqaqambe kakhulu njengeSpica kunye neendawo ezibonakala zibanzi kakhulu + 80 ° ukuya -80 °.
Intombi enyulu ibizwa ngegama elivela kwi-Latin Virgo, uphawu lwe-zodiac ngo-Septemba 22. E-Italiya ibizwa ngokuba yiVergine ngelixa amaFrentshi eyibiza ngokuba yiVietge.
Uphawu olwahlukileyo: Iintlanzi. Oku kuphakamisa ukuba lo mqondiso kunye neVirgo ziyahambelana kwaye zibekwe ngaphaya kwevili lokuvumisa ngeenkwenkwezi, oko kuthetha ukuvisisana kunye nemfesane kunye nolunye uhlobo lwesenzo sokulinganisa phakathi kwezi zimbini.
Ukuziphatha: Imfono. Oku kubonisa inkululeko yabantu abazalwe ngoSeptemba 22 kwaye baluphawu lobukrelekrele kunye nokuziqhenya.
Indlu elawulayo: Indlu yesithandathu . Olu dibaniso lubonisa ukuba iVirgos ibeka ixabiso elikhulu kukhathalelo lwempilo yabo kwaye banomdla kakhulu kwimicimbi enxulumene nomsebenzi. Le ndlu yindawo yenkonzo, imiba yezempilo kunye nokusebenza ngokukuko.
Umzimba olawulayo: Imercury . Eli ziko lasezulwini kuthiwa linempembelelo kwinkuthazo nakwifilosofi. IMercury yenye yeeplanethi ezinempembelelo enkulu xa kubuyiswa emva. I-Mercury ikwacacisa nokucaca kubomi baba bantu.
Isiqalelo: Umhlaba . Eli nqaku limele ulwakhiwo kunye nokusebenziseka kwaye kuthathwa njengempembelelo kubantu abazithembileyo nabachubekileyo phantsi komqondiso we-zodiac kaSeptemba 22. Iimodeli zomhlaba zibandakanya amanzi kunye nomlilo.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . IVirgo ichonga ngokuhamba ngolwesiThathu ohleliweyo ngelixa oku kuphindwa kabini kunxibelelwano phakathi koLwesithathu kunye nolawulo lwayo yiMercury.
Amanani anethamsanqa: 4, 5, 11, 17, 22.
Ulwazi oluthe kratya ngoSeptemba 22 Zodiac ngezantsi ▼
Indoda yaseCapricorn emtshatweni: Ngaba luhlobo luni lomyeni yena?
Ukuthandana nomntu weVirgo: Ngaba unayo into eyenzayo?
aries kunye nomhlaza ukuhambelana ngokwesondo
Disemba 29 ukuhambelana kweempawu zodiac
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Okthobha 30
indlela yokujongana nepisces man
ipisces indoda kunye neepisces ibhinqa elinomtsalane
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 12
12/20 uphawu lweenkwenkwezi